မိဖြူ | PoemsCorner
မိဖြူဘ၀အစ ငယ်ငယ်ထဲက အားလုံးပိစပ်ဖျားမှာ မိဖြူတဲ့..မိဖြူဆိုတဲ့ အတိုင်းကြောင်ဖြူမလေးလိုဘဲ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးသေးသေးလေး..
ငယ်ငယ်ဆိုတာက လမ်းရှောက်တပ်ခါစ ချိန်ထဲက မိဘတွေက ပြည်သူပိုင်သိမ်းခံရတယ်..
လက်ရှိမှ လက်မဲ့သို့ ရောက်ခဲ့ရပြီ မိဖြူရဲ့ အဖေကြီးက နှလုံးရောဂါနဲ့ဆိုတော့ အိပ်ယာထဲမှာ လဲရောပေါ့ အမေကတော့ လှနေအောင်နေရုံသာ သိတာ အဖေက အမေ့ကို လှလှလေးထားတာ
မိဖြူမှတ်မိတယ် မိဖြူ အသက်(5)နှစ်လောက်က ဒယ်ဒီက မိဖြူလက်ကို ဆွဲပြီး တာမွေဈေးကိုသွားတယ် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မာမီကို မြင့်ရေ ရေချိုး သနခါးလိမ်းကွာ ငါတော့ထမင်းဟင်းချက်လိုက်ဦးမယ်တဲ့ မိဖြူကိုတော့ မိဖြူရေ ဒယ်ဒီကို ဟိုဟာလေး လုပ်ပေးပါဦး ဒီဟာလေးလုပ်ပေးပါဦးဆိုပြီး မိဖြူကတော့ ဒယ်ဒီရဲ့တောက်တိုပေါ့..ပြီးလို့ ကျက်ပြီဆိုတာနဲ့ ထမင်းပွဲ ခူးတော့တယ် သစ်သားစားပွဲဝိုင်းနဲ့ လက်ဆေးရယ်ဇလုံနဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ မိဖြူ ရေချိုးရပြီလေ ကဲ..ပြီးတော့မှ ဒယ်ဒီလည်းရေချိုးတယ် ကျန်တဲ့ မောင်နှမလေးယောက်လည်း ရေချိုး အဆင်သင့်ဖြစ်တော့
မာမီကို လက်ဆေးခိုင်းပြီး မိဖြူတို့ မောင်နှမတွေပါ ထမင်းဝိုင်းလေးစတော့တယ်..မိဖြူတို့က ဟင်းဆို အသားတတုံးဘဲစားရတယ် ကိုယ်တိုင်လည်း ဟင်းခတ်ခွင့် မရှိဘူး ဒယ်ဒီကဘဲ အားလုံးကို ဝေပုံကျထည့်ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်..စားပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်ပုဂံကိုယ်ဆေးရပါတယ်..
အမကြီးကတော့ မာမီနဲ့ ကျန်တဲ့ အလုပ်တွေ ၀ိုင်းကူရပါတယ်..
မိဖြူတို့အိမ်ကို သီတင်းကျွတ်ဆို ဒယ်ဒီတပည့်တွေက ရှားမီးကိတ်မုန့်တွေနဲ့ လာကတော့တာ အိမ်မှာ ဘူးတွေတောင်ထပ်ထားရတယ်..ဒါပေမဲ့ မိဖြူတို့ယူစားခွင့်မရှိပါဘူး
ဒယ်ဒီကလည်း မနက်စာ တကြိမ်နဲ့ နေ့လည်စာ ကော်ဖီချိန်တခါ ကျေးပါတယ် ကျန်တဲ့ချိန်စားခွင့်မရှိပါဘူး တရက်တော့ မိဖြူနဲ့ မဖြူအကို တို့နှစ်ယောက် ရှားမီးကိတ် တယောက်တခု ယူစားမိတာ ဒယ်ဒီသိတော့ ရှိသမျကိတ်တွေကို ကျီးကန်းတွေ ချကျွေးပြစ်ပါရော ပြီးတော့ မိဖြူတို့ကို ထိုင်ကြည်ခိုင်းထားတယ်.. ခနနေတော့ မိဖြူတို့ကျောင်းသွားချိန်ရောက်တော့ မိဖြူတို့ကျောင်းသွားရတယ် အဲ့ဒီချိန်ကျ ဒယ်ဒီကလည်း အိပ်ပြီပေါ့ ဘာရမလည်း မိဖြူက ကျောင်းနဲ့အိမ်ကနီးနေတော့ မုန့်စားချိန်လည်းရောက်ရော
ကျီးကျွေးထားတဲ့ ရှားမီးမုန့်ကို အိမ်ဘေးကနေချောင်းပြီး လာယူတာပေါ့ ကျောင်းကျတော့ ကိုယ်လည်း မစားနိုင်တော့ပါဘူး သူငယ်ချင်းတွေကို မိဖြူလိုဘဲ စားစေချင်လို့လိုက်ဝေကျွေးပြစ်လိုက်တာပေါ့…ညနေကျောင်းပြန်တော့ ဒယ်ဒီလည်းအိပ်ယာနိုးရော ကျီးကျွေးထားတဲ့ ကိတ်မုန့်တွေ တခုမှ မရှိတော့ဘူးလေ ဒယ်ဒီကလည်း အဲ့လောက်အများကြီးကျီးလက်ချက်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး မိဖြူလက်ချက်ဘဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ တပ်ကနဲ့သိတာပေါ့ မိဖြူကို နှစ်ခါ မစစ်ရပါဘူး မိဖြူမညာတပ်ဘူးလေ ဒယ်ဒီကို အမှန်တိုင်းပြောလိုက်တယ်
ကျောင်းကသူငယ်ချင်းတွေကို ကျွေးချင်လို့ပြန်ယူပြီးကျွေးလိုက်တယ်လို့ ကျီးတွေက ၀နေတော့မစားတော့ဘူးဒယ်ဒီ သူငယ်ချင်းတွေက စားတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် ဒီတခါတော့ မဖြူအရိုက်မခံရတော့ဘူး အလျောက်ကောင်းလို့အထောင်းသက်သာသွားတယ်….(ကျမရေးမဲ့ ဒိုင်ယာဒီ အစ)
Photo: မိဖြူ… မိဖြူဘ၀အစ ငယ်ငယ်ထဲက အားလုံးပိစပ်ဖျားမှာ မိဖြူတဲ့..မိဖြူဆိုတဲ့ အတိုင်းကြောင်ဖြူမလေးလိုဘဲ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးသေးသေးလေး.. ငယ်ငယ်ဆိုတာက လမ်းရှောက်တပ်ခါစ ချိန်ထဲက မိဘတွေက ပြည်သူပိုင်သိမ်းခံရတယ်.. လက်ရှိမှ လက်မဲ့သို့ ရောက်ခဲ့ရပြီ မိဖြူရဲ့ အဖေကြီးက နှလုံးရောဂါနဲ့ဆိုတော့ အိပ်ယာထဲမှာ လဲရောပေါ့ အမေကတော့ လှနေအောင်နေရုံသာ သိတာ အဖေက အမေ့ကို လှလှလေးထားတာ မိဖြူမှတ်မိတယ် မိဖြူ အသက်(5)နှစ်လောက်က ဒယ်ဒီက မိဖြူလက်ကို ဆွဲပြီး တာမွေဈေးကိုသွားတယ် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မာမီကို မြင့်ရေ ရေချိုး သနခါးလိမ်းကွာ ငါတော့ထမင်းဟင်းချက်လိုက်ဦးမယ်တဲ့ မိဖြူကိုတော့ မိဖြူရေ ဒယ်ဒီကို ဟိုဟာလေး လုပ်ပေးပါဦး ဒီဟာလေးလုပ်ပေးပါဦးဆိုပြီး မိဖြူကတော့ ဒယ်ဒီရဲ့တောက်တိုပေါ့..ပြီးလို့ ကျက်ပြီဆိုတာနဲ့ ထမင်းပွဲ ခူးတော့တယ် သစ်သားစားပွဲဝိုင်းနဲ့ လက်ဆေးရယ်ဇလုံနဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ မိဖြူ ရေချိုးရပြီလေ ကဲ..ပြီးတော့မှ ဒယ်ဒီလည်းရေချိုးတယ် ကျန်တဲ့ မောင်နှမလေးယောက်လည်း ရေချိုး အဆင်သင့်ဖြစ်တော့ မာမီကို လက်ဆေးခိုင်းပြီး မိဖြူတို့ မောင်နှမတွေပါ ထမင်းဝိုင်းလေးစတော့တယ်..မိဖြူတို့က ဟင်းဆို အသားတတုံးဘဲစားရတယ် ကိုယ်တိုင်လည်း ဟင်းခတ်ခွင့် မရှိဘူး ဒယ်ဒီကဘဲ အားလုံးကို ဝေပုံကျထည့်ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်..စားပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်ပုဂံကိုယ်ဆေးရပါတယ်.. အမကြီးကတော့ မာမီနဲ့ ကျန်တဲ့ အလုပ်တွေ ၀ိုင်းကူရပါတယ်.. မိဖြူတို့အိမ်ကို သီတင်းကျွတ်ဆို ဒယ်ဒီတပည့်တွေက ရှားမီးကိတ်မုန့်တွေနဲ့ လာကတော့တာ အိမ်မှာ ဘူးတွေတောင်ထပ်ထားရတယ်..ဒါပေမဲ့ မိဖြူတို့ယူစားခွင့်မရှိပါဘူး ဒယ်ဒီကလည်း မနက်စာ တကြိမ်နဲ့ နေ့လည်စာ ကော်ဖီချိန်တခါ ကျေးပါတယ် ကျန်တဲ့ချိန်စားခွင့်မရှိပါဘူး တရက်တော့ မိဖြူနဲ့ မဖြူအကို တို့နှစ်ယောက် ရှားမီးကိတ် တယောက်တခု ယူစားမိတာ ဒယ်ဒီသိတော့ ရှိသမျကိတ်တွေကို ကျီးကန်းတွေ ချကျွေးပြစ်ပါရော ပြီးတော့ မိဖြူတို့ကို ထိုင်ကြည်ခိုင်းထားတယ်.. ခနနေတော့ မိဖြူတို့ကျောင်းသွားချိန်ရောက်တော့ မိဖြူတို့ကျောင်းသွားရတယ် အဲ့ဒီချိန်ကျ ဒယ်ဒီကလည်း အိပ်ပြီပေါ့ ဘာရမလည်း မိဖြူက ကျောင်းနဲ့အိမ်ကနီးနေတော့ မုန့်စားချိန်လည်းရောက်ရော ကျီးကျွေးထားတဲ့ ရှားမီးမုန့်ကို အိမ်ဘေးကနေချောင်းပြီး လာယူတာပေါ့ ကျောင်းကျတော့ ကိုယ်လည်း မစားနိုင်တော့ပါဘူး သူငယ်ချင်းတွေကို မိဖြူလိုဘဲ စားစေချင်လို့လိုက်ဝေကျွေးပြစ်လိုက်တာပေါ့…ညနေကျောင်းပြန်တော့ ဒယ်ဒီလည်းအိပ်ယာနိုးရော ကျီးကျွေးထားတဲ့ ကိတ်မုန့်တွေ တခုမှ မရှိတော့ဘူးလေ ဒယ်ဒီကလည်း အဲ့လောက်အများကြီးကျီးလက်ချက်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး မိဖြူလက်ချက်ဘဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ တပ်ကနဲ့သိတာပေါ့ မိဖြူကို နှစ်ခါ မစစ်ရပါဘူး မိဖြူမညာတပ်ဘူးလေ ဒယ်ဒီကို အမှန်တိုင်းပြောလိုက်တယ် ကျောင်းကသူငယ်ချင်းတွေကို ကျွေးချင်လို့ပြန်ယူပြီးကျွေးလိုက်တယ်လို့ ကျီးတွေက ၀နေတော့မစားတော့ဘူးဒယ်ဒီ သူငယ်ချင်းတွေက စားတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် ဒီတခါတော့ မဖြူအရိုက်မခံရတော့ဘူး အလျောက်ကောင်းလို့အထောင်းသက်သာသွားတယ်….(ကျမရေးမဲ့ ဒိုင်ယာဒီ အစ)
နှင်းတွေကျနေတဲ့ ဤ မနက်ခင်းတွင်…
မတန်လိုက်လေ. . .